नेटो र रुसको द्वन्द्वको अर्थ तेस्रो विश्वयुद्ध: बाइडेन
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेनले युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकाले प्रत्यक्ष ढंगले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् । युक्रेनमा हामीले रुसविरुद्ध लडाइँ गर्नेछैनौँ । नेटो र रुसको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको अर्थ तेस्रो विश्वयुद्ध हो । यसलाई हामीले रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ, बाइडेनले भने । यसअघि रुसमाथि...
मुस्लिमहरूप्रति कठोर नीति लिएको भन्ने आरोप लागिरहँदा भारत सरकारले मुस्लिमविरोधी केही एपहरूलाई बन्द गरेको छ । भारत सरकारले मुस्लिम महिलालाई बिक्रीमा राख्ने भारतीय एप बन्द गराएको हो । मुस्लिम महिलालाई अपमानित गरेको र बिक्रीमा राख्ने गरेको आरोपमा सरकारले बुल्ली बाई...
जलवायु परिवर्तनको असर र पीडा बढ्दो
बढ्दो जलवायु परिवर्तनले संसारभरका लाखौँ मानिसमा पीडा दिएको एउटा पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । चेरिटी क्रिश्चियन एड नामक संस्थाले गरेको अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका कारण यो वर्ष विश्वमा भएका १० डरलाग्दा प्राकृतिक घटना र त्यसले पुर्याएको अर्बौँ डलर क्षतिबारे उल्लेख गरिएको...
म्यानमारमा हिंसा बढ्दो, सेनाद्वारा ३५ सर्वसाधारणको हत्या
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था &#39;सेभ दि चिल्ड्रेन&#39; ले म्यानमारमा आफ्नो दुई कर्मचारी पछिल्लो दुई दिनदेखि बेपत्ता भएको जनाएको छ । लन्डनस्थित सेभ दि चिल्ड्रेन मुख्यालयले म्यानमारको सेनाले शुक्रबार काया राज्यबाट ३५ भन्दा धेरैलाई चरमपन्थी भन्दै हत्या गरेको छ...
यस्तो पो सम्बन्धविच्छेद !
दुबईका अर्बपति शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतुम र उनकी पूर्व पत्नी प्रिन्सेस हया बिन्त अल हुसेनबीच सम्बन्धविच्छेदका लागि अनुमति प्राप्त भएको छ । तर यस अनुमतिमा दुबईका शासक मकतुमले रेकर्ड ५० करोड पाउन्ड अर्थात् करिब ८० अर्ब रुपैयाँ...
यस्ता छन् विश्वका प्रभावशाली एक सय महिला
विश्वका एक सय प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक भएको छ। समाचार संस्था बिबिसीले वर्ष २०२१ का सबैभन्दा प्रेरक र प्रभावशाली १०० महिलाको सूची जारी गरेको हो। सूचीमा विश्वभरमा समाज र संस्कृतिलाई नयाँ सिराबाट बदल्न भूमिका निभाएका महिलाहरू अटाएको बिबिसीले जनाएको छ।...
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनले साना देशलाई कहिल्यै पनि धम्की नदिने बताएका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन (आसियान) को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । चीनले साना देशहरुलाई कहिल्यै धम्की दिन्न । हामीले यस...
चीनले केही महिना अगाडि गरेको हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण संसारभर पुगेको बताउँदै अमेरिकाका एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीले चीनले अमेरिकामा कुनै दिन अकस्मात् आणविक हमला गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी सेनाका उपप्रमुख जनरल जोन हाटेनले भने, केही महिना अगाडि चीनको...
अमेरिकालाई उछिन्दै चीन विश्वकै धनी देश बनेको छ । परमार्शदाता म्याकिन्से एण्ड कम्पनीले एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो २० वर्षमा चीनको सम्पत्ति तीन गुणाले बढेको जनाएको हो । तथ्यांकअनुसार सन् २००० मा चीनको कूल सम्पत्ति ७ ट्रिलियन डलर रहेकोमा सन्...
अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको पूर्वाधार विकास निर्माणसम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ह्वाइट हाउसमा सोमबार आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकनबीच रहेको दुरी अब कम हुने आशा गरिएको छ । यो रकमले अमेरिकामा...
एजेन्सी ।सोमालियामा खडेरीका कारण खाद्य संकट परेको छ । सोमालियका नागरिकहरुले खाद्यान्न अभावको समस्या झेलिरहेको र दिन प्रतिदिन यो समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ । सोमालियामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायतासम्बन्धी निकायले खाद्य संकटबारे जानकारी दिएको छ । मानवीयता सम्बन्धी...
लिबियाका पूर्वतानाशाह गद्दाफीका छोराले दिए राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी
त्रिपोली ।लिबियाका तत्कालीन शासक मौमुर गद्दाफीका छोराले त्यहाँ हुन लागिरहेको राष्ट्रपति निर्वाचमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन् । डिसेम्बरमा हुने निर्वाचनमा सैफ अल इस्लाम अल गद्दाफीले उम्मेदवारी दिएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा तस्विरमा ४९ वर्षीय इस्लाम गद्दाफी सिभास्थित...
चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिको यस्तो भयो सवाल–जवाफ
बेइजिङ। अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको बहुप्रतिक्षित भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा दुबै देशका नेताहरुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउने बाचा गरेका छन् । भर्चुल बैठकलाई सुरुमा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनअमेरिका...
तालिवानले फेरि किन गर्यो अमेरिकी सेनाको हतियार प्रदर्शन ?
काबुल । तालिवानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा हतियार प्रदर्शन गरेको छ । तालिवानले अमेरिकी सेनाबाट नियन्त्रणमा लिइएका तथा स्वदेश फर्किनुअघि अमेरिकाले नै छोडेका हतियार प्रदर्शन गरेको हो । २५० जना तालिवान सेनालाई तालिम प्रदान गरेपछि हतियार प्रदर्शन गरिएको रक्षा मन्त्रालयका प्रवत्ता...
इजिप्टमा बिच्छीले टोकेर तीनजनाको मृत्यु, सयौँ घाइते
इजिप्टमा संसारकै सबैभन्दा विषालु बिच्छीहरु पाइन्छन् । जस्तै,एउटा फ्याटटेल ले टोक्यो भने एक घण्टा भन्दा कम समयमै मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ । बिच्छीले टोकिसकेपछि व्यक्तिलाई सास फेर्नमा कठिनाइ हुने, मांसपेसी दुख्ने र टाउकोमा असामान्य हलचल हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्...
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठनले युरोप कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्ने चेतावनी दिएको दुई साता नवित्दै युरोपेली मुलुकहरु धमाधम लकडाउनमा जान थालेका छन् । नेदरल्याण्डले देशब्यापी लकडाउन घोषणा गरेको भोलिपल्ट अष्ट्रियाले पनि लकडाउन घोषणा गरेको छ । तर,यस पटकको लकडाउनको प्रकृति...
अस्ट्रियामा खोप नलगाएकालाई देशव्यापी लकडाउन
भियना । अस्ट्रियामा खोप नलगाएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरिएको छ । लकडाउनबाट करिव २० लाख मानिस प्रभावित हुनेछन् । कोभिड संक्रमणका बिरामी बढेसँगै सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको हो । प्रतिबन्धपछि उनीहरू नियमित काम गर्न, अत्यावश्यक खानेकुरा...
अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिबीच तेस्रो वार्ता
न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच सोमबार साँझ भर्चुल बैठक हुँदैछ । दुई देशबीच तनाब बढिरहेका बेला हुन लागिरहेको यो बैठकलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । केही दिनअघि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा दुई देशले आश्चर्यजनक सहमति...
लिबियामा एक पूर्वतानाशाहका छोराले दिए राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी
त्रिपोली । लिबियाका तत्कालिन शासक मौमुर गद्दाफीका छोराले त्यहाँ हुन लागिरहेको राष्ट्रपति निर्वाचमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छन् । डिसेम्बरमा हुने निर्वाचनमा सैफ अल इस्लाम अल गद्दाफीले उम्मेदवारी दिएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा तस्विरमा ४९ वर्षीय इस्लाम गद्दाफी...
फ्रान्सको राष्ट्रपति कार्यलयमा महिला सैनिकमाथि बलात्कार
पेरिस । फ्रान्समा राष्ट्रपति कार्यलयमा एक महिला सैनिकमाथि भएको बलात्कारबारे अनुसन्धान सुरू भएको छ । राष्ट्रपति कार्यलयमा आयोजित मदिरापान कार्यक्रममा एक महिला सैनिकले आफूमाथि यौन दुर्व्यबहार भएको बताएकी थिइन् । बलात्कार गर्ने व्यक्ति पनि सैनिक नै रहेको जनाइएको छ ।...